यद्यपि, नेपाली महिलाका लागि अहिले पनि निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान रहेको स्वीकार्ने उनी नेपालको संविधानले राजनीतिक रुपमा प्रतिस्पर्धामा जाने एउटा ढोका चाहिँ खोलिदिएको तर बराबरी र हाराहारी जाने स्थिति भने अझै बनिसकेको धारणा राख्छिन् ।
नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपतिसँग अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसका अवसर. पारेर नेपालको महिला आन्दोलन, महिला सशक्तीकरण, संविधान संरक्षकका हैसियतले खेल्नुभएको भूमिका, समसामयिक विषय र आगामी निर्वाचनको सेरोफेरोमा रहेर राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रधान सम्पादक राजु शाक्य र वरिष्ठ समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपानेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
– एकदमै सुखद संयोग हो । यो एक शताब्दीभन्दा लामो संघर्षको प्रतिफल हो भन्ने मलाई लाग्दछ । धेरै अग्रज महिलाले महिलाको समान हकअधिकारका लागि आन्दोलन गरे, त्यसमा ठूलो बलिदानी पनि भएको छ । परिणामस्वरुप यस्तो ऐतिहासिक संयोग जुरेको भन्नुपर्दछ ।
जहाँनिया राणा शासनको समयमा महिलाको समान हकका लागि उहाँले थुप्रै पटक आवाज उठाउँदै संघर्ष गर्नुभयो र त्यसपछि तत्कालीन शासकको चेत खुलोस् भन्ने ध्येयले आफ्ना थुप्रै अनुयायीका साथ जल समाधि लिनुभयो । यो नेपालको महिला आन्दोलनको इतिहासमा एउटा ठूलो घटना हो । नेपाली महिलाले त्यस घटनाबाट समान अधिकारका लागि शिक्षा र प्रेरणा लिएर अघि बढिरहेका छन् । मंगलादेवी, सहाना प्रधान, साधना प्रधान, शैलजा आचार्य, रेवन्तकुमारी आचार्य लगायतले समान अधिकारका लागि योगमायाले गरेको संघर्षलाई निरन्तरता दिँदै योगदान पुर्‍याउनुभएको छ । त्यसपछि २०३५/३६ सालमा अलि बढी र २०४६ सालमा अझ व्यापक भएर पछिल्लो समयमा परिणाम आएको देखिन्छ । यी सबै कुराले नै नेपालमा महिला आन्दोलन आधारभूत तहदेखि नै बलियो रहेको पुष्टि गर्छ ।
२०६२/६३ पछि यहाँकै अगुवाइमा राखिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसँगै राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको थियो । अब महिलाको पाटोमा उठाउन बाँकी विषय के कस्ता रहे ?
– २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा महिलाको राजनीतिमा सहभागिताका विषयमा उठाइएको कुरा आधा मात्रै पूरा भएको छ । समानताको लक्ष्यमा पुग्न अहिलेलाई एक तिहाइ आरक्षण भनिएको, त्यो मेरो आफ्नै हातले लेखेर संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिएँ । त्यतिखेर पनि के लेख्न हुन्छ के लेख्न हुँदैन भनेर झमेला भएको थियो । हुन्छ हुन्छ भन्दै जोरजुलुम गरेपछि मैले हातले लेखेकोलाई टाइप गरेर दर्ता गराएको जस्तो लाग्दछ । त्यसबेला हुँदैन भनेर रोक्ने प्रयास पनि भएको थियो । त्यतिखेर महिला पुरुष बराबरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको हो । राजनीतिमा पाँच प्रतिशत पनि महिला सहभागी नभएको बेलामा आरक्षणको व्यवस्था नगरी समान प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता नै वृद्धि नहुने देखेर एक तिहाइको कुरा त्यसबेला अघि सारिएको हो । त्यो आन्दोलनबाट सिकेको कुरा हो । नारामा सबै अधिकार बराबरी भनियो, व्यवहारमा कहिले पनि कार्यान्वयन नभएपछि यो बाटोबाट जानुपर्छ भनेर मैले जोड गरेको हुँ । संसद्बाट त्यो पारित पनि भएको हो । महिला र पुरुष बराबरी त हुनै बाँकी छ, बराबरीमा बढ्न संवैधानिक र कानुनी प्रावधान पनि बनाउनु पर्दछ । अबको स्थानीय तहलाई हेर्दा महिला सहभागिता ३३ देखि ४० प्रतिशत हुने देखिन्छ । तर त्यो उम्मेदवारीको मात्रै सुनिश्चितता जस्तो भइरहेको छ । त्यसमा टेकेपछि अघि बढ्न सकिन्छ भनेर गरिएको हो । स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा महिला अनिवार्य उठाउनुपर्छ । त्यो गर्दा परिणाममा चाहिँ के आउँछ भन्ने सुनिश्चितता अझै भएको छैन । प्रतिस्पर्धामा जाने एउटा ढोका त खुल्यो तर बराबरी र हाराहारी जाने स्थिति बनिसकेको छैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको संरक्षकको हैसियतले संविधान जारी भएपछिको मुलुकको अवस्थालाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
– संविधान जारी भएको छ, त्यो नै ठूलो उपलब्धि हो । केही समय संविधान जारी गर्न नै पनि अन्योल जस्तो स्थिति थियो । संविधानसभा जस्तो ठूलो जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा दोहोर्‍याएर निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थितिले अब संविधान कसरी बन्ने हो भन्ने जनतामा अन्योल र निराशाजस्तो पनि थियो । त्यो कुरालाई उपलब्धिमा बदलिसकेका छौँ, त्यो परिस्थिति चिरी सकिएको छ । अब संविधानमा उल्लेख भएका जे जस्ता उपलब्धिहरु छन्, तिनको प्रतिफल जनताले पाउनु पर्दछ ।
– हाम्रो देशमा राजनीतिक संक्रमणकाल अलि लम्बिँदो अवस्थामा रह्यो । हरेक कुरामा द्विविधा हुने र त्यसलाई चिर्न समय लाग्ने, संविधानसभा नै पनि दुई वर्षका लागि भनियो, दुई वर्षको संविधानसभा चार वर्ष गयो, त्यसबाट पनि नभएर फेरि चुनाव गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र नयाँ जनादेशअनुसार दुई वर्षमा बल्ल संविधान जारी भयो । नेपालमा संविधान नै नभएको त होइन नि ! उठेका नयाँ मागलाई संविधानमा राख्नुपर्ने स्थिति बन्यो । त्यसका लागि पनि धेरै समय लाग्यो । नयाँ संविधानमा पनि सबैको माग नसमेटिएको हुन सक्दछ । जे उपलब्धि भयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै थप उपलब्धिका लागि अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा थोरै असन्तुष्टि रह्यो र त्यसले चुनाव गराउने कुरालाई रोकी राखिएको जस्तो स्थिति बनेको छ । चुनाव भनेको लोकतन्त्रको आत्मा हो । चुनावै भएन भने कसरी लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ ? कसरी नागरिकले अभिमत प्रकट गर्दछन् ? स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको झन्डै २० वर्ष हुन लागिसक्यो । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र गरेर मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक छ । अहिले देखिएको अन्योल चिर्न जसरी आन्तरिक छलफल गरी आत्मनिर्णय लिइनुुपर्थ्यो त्यो नगरी कहिलेकाहीँ प्रचारको पछि लाग्न पुग्दा ढिलो हुन पुग्यो भन्ने लाग्छ । राजनीतिक दलले बाह्य दबाब र प्रभावमा नपरी के गर्दा नेपालको हित हुन्छ त्यो निर्णय गरेर अब अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो विदेश नीति असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तमा आधारित छ । हामी हाम्रो देशको हित हुने काम गर्दछौँ । जे गर्दा देशको हित हुन्छ हामी त्यसरी नै अघि बढ्छौँ । हामी कुनै पनि शक्तिको खेल र होडमा जाँदैनौँ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को नेपालप्रतिको मित्रभावलाई शान्ति, स्थायित्व र विकासको वातावरण बनाउन उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । मुलुक आत्मनिर्भर हुनुपर्‍यो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्‍यो । सधैँभरि हाम्रा मित्र छन् भनेर चुप लगेर बस्ने, समस्या मात्रै देखाउने, हरेक साल घाटा बजेट बनाउने र अर्काको मुख मात्रै ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य मात्रै होइन, समूल नष्टै हुनुपर्दछ ।
– देशको राजनीतिक माहोल सकारात्मक देखेको छु । उहाँहरु मिलेर जानुहुन्छ भन्ने नै मेरो आशा छ । यत्रो ठूलो उपलब्धि हासिल भएर नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो । महिला पुरुष बराबरी अधिकार पाउने स्थितिमा छन् । समावेशी छ, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गको हकअधिकार सुनिश्चित भएको छ, जातीय छुवाछूत बन्द भएको छ । लामो समयसम्म रहेका रीतिथितिलाई व्यवस्थित गर्न समय त लाग्छ नै । सङ्घीयताको विषयमा पनि भौगोलिक रुपमा प्रदेश गठन भइसकेको छ । यो उपलब्धिलाई जनतासामु पुर्‍याउन प्रयास नगर्नु भनेको त कमजोरी हुन्छ । त्यो राम्रो कुरा होइन । संविधानमा व्यवस्था गरिएका राम्रा कुरा लागू गर्नुपर्छ । नेपालको इतिहासमा नभएका राम्रा कुरा सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, सिद्धान्तको हिसाबले सविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख उल्लेख छ । कुरा मात्रै गरेर कसरी देश अघि बढ्छ ? प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्‍यो नि ! मैले नेताहरुलाई भन्ने कुरा पनि त्यही हो । म आशावादी छु । नेताहरु गम्भीर हुनुहुन्छ । स्थानीय चुनाव हुन्छ, त्यसपछि अरु चुनावहरु क्रमशः हुन्छन् । माघ महिनासम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसक्नु पर्दछ । संविधानमै अहिलेको संसदको आयु तोकिएको छ । निर्वाचन हुन नसक्दा आउने रिक्ततालाई गम्भीर ढङ्गले लिनुपर्छ भनेको छु । स्थानीय तहको चुनावको तिथिमिति घोषणा भइसकेकाले ढिलो भएपनि राम्रै गतिमा देश अघि बढेको मैले महसुस गरेको छु ।
– महिलालाई बराबरी र हाराहारीमा पुर्‍याउन संवैधानिक व्यवस्था नै गर्नुपर्दछ । हाललाई ५० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने नै हो । त्यसपछि समाज कसरी अघि बढ्छ त्यो हेरेर अघि बढनु पर्दछ । सहअस्तित्वको कुरा भएकाले बराबरीमा जानुपर्छ भन्ने मेरो एउटै विचार हो ।
– राजनीतिक दलका नेता भनेको देशको जनताका नेता हुन् । नेताको जीवनशैली अत्यन्तै सरल हुनुपर्दछ । उहाँहरु जहिले पनि जनतासँगको सम्पर्कमै हुनुपर्दछ । सदाचार र आदर्श बनाइराख्नु पर्दछ । सदाचार र आदर्श भनेको ढोङ्ग होइन ।